Kala aag gobolada Google Earth - Geofumadas
Maarso, 2016 Google Earth / Maps
Faylkan waxa ku jira qaababka UTM ee qaabka kmz. Marka la soo dhajiyo waa inaad iska furto.
Soo qaado faylka halkan
Kaliya sida tixraac ... ka wadataa juquraafi ka dunida dacaladeeda, in qaybaha kala yimaado sida aad u la tufaax, ka dhigi loolalka jeexan toosan (yeedhay dhererka) iyo dhimista siman dhigi isku midka ah (loo yaqaan latitudes).
In the case of dhererka, bilaabaan in la qoran ka suusho ee Greenwich eber suusho la yiraahdo bari, waxay ku qoran yihiin ilaa 180 darajo, halkaas oo suusho isla dalka (yeedhay antemeridiano) kala qaybinaya, qeybtii tani waxaa la yiraahdaa " Tani. " Markaas badhkii kale waxaa loo yaqaan West, guud ahaan wakiil W (galbeed), sida loolalka Greenwich bilow dhinaca ka soo horjeeda eber in 180 degrees.
Habkani waa in la go'aamiyo isku-duwayaasha aan u lahayn in ay ku sameeyaan meel sare oo ka sarreeya heerka badda, maaddaama ay tahay fiilo ka bilaabma bartamaha dhulka dusha sare, tani waa qorsheynta isticmaalka Google Earth, waana tan ee isuduwayaasha isticmaala fiidiyo kml, marka lagu daro tixraaca loo yaqaan 'spheroid reference' waa lagu daraa kaas oo ah habka lagu qiyaasi karo dhulka dusha sare ee cabiraadda. Google wuxuu u adeegsadaa WGS84 inuu yahay tixraac tixraac ah (inkastoo ay jiraan qalab u oggolaanaya UTM isku duwidda in lagu galo Google Earth). Faa'iidada ugu weyn ee qadadani waa in isku-duwani yahay mid gaar ah dhulka dushiisa, inkastoo xakamaynta hawlaha lagu xisaabinayo masaafooyinka ama tilmaamaha aysan waxtar lahayn "kuwa aan juquraafiyiinta ahayn".
Iskuduwaha UTM wuxuu ku saleysan yahay fikradda ah inaad tixgeliso tixraac tixraac ah oo ka soo jeeda qiyaasta loo yaqaan 'Traverso de Mercator. Dhulka waxaa had iyo jeer u qaybiya meridiyiin, qaybo ka mid ah lix darajo oo ka kooban wadarta 60, kuwaa waxaa lagu magacaabaa aag. Tirinta goobahaasi waxay ka bilaabanayaan antemeridian, laga bilaabo eber ilaa 60 laga bilaabo galbeed ilaa bari.
Qaybaha in ay curiyaan isku midka ah laga bilaabo 84 S inay 80 N, oo waxay ku qoran yihiin warqadihii laga bilaabo C inay X ( "I" waa laga saaray iyo "O"), qeybta kasta oo uu leeyahay 8 degrees UNku , marka laga reebo X ee leh shahaadada 12.
Sidaas meel leeyahay x ah duwo, oo laga bilaabo in ay dhacdo Central America, soohdinta u dhaxaysa goobaha ay 15 16 oo uu leeyahay qiyaas ah duwo 178,000 oo gaadho oo dheeraad ah ama ka yar 820,000. Iskuduwaan noocan ahi waa isku mid aag kasta, lakin waxaan caddaynaynaa, ma aha xariijin dhexdhexaad ah laakiin ujeedooyinka cabbirka degaanka, waa mid la mid ah. xuduudaha u dhexeeya goobaha ku dhow, laakiin qayb ka dhan ah dhidibka dhexe, halkaas oo ay jiraan suusho si buuxda u taagan, kuwaas oo dhererkiisu waa 300,000 loo yaqaan "this been ah", ujeedooyin labada midig ee suusho iyo bidix waxaa jira unugyo no diidmo
Maps, waxaynu og nahay ujeedooyin cadastral, anoo haysta kafado 1: 10,000 ama 1: 1,000 Risaalo kac ku yaala goobahan, in post a soo socda sharxi sidee Risaalo this.
Post Previous«Previous Domain Model ee Maamulka Dhulka - Case of Colombia
Post Next Blockchain iyo Seeraar codsatay in Maamulka Land eeNext »
8 Jawaab ah "Soo-dejinta aagagga macaamiisha Google Earth"
Maaha suurtagal Isku-duwidda sinnaanta waxaa lagu soo celin karaa ugu yaraan laba jeer x iyo y oo ka mid ah aagga 60
Ma jiraa waddo lagu xisaabiyo xawaaraha uu leeyahay isku-duwaha UTM?
Gacaliyahayga, waxaan ku noolahay Nicaragua. Waxaan cunnaa xoogaa arday ah Salvadoran oo ku taal Altamira anna waan kuu sharraxay.
Ciladaha isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ka akhrin jiray mowduucyada kujira bartaada 4 sanado qaar hadda. Xaqiiqdu waxay tahay waxaan soo degsaday aagagga UTM ee GEarth. Waxaan hayaa guud ahaan khariidadaha topografi-ahaaneed ee Nicaragua (xaashiyahaas oo "cabbiraya" 10 ′ of latitude x 15 ′ of longitude) Fikradda ayaa ah inaan iyaga ugu qaado GEarth si la mid ah aagagga UTM. Khabiirna iguma ahan AutoCAD laakiin waxbaa aan ku fiicanyahay Excel. Waxaan isku dayay inaan xalliyo sidan oo kale: In Excel waxaan hayaa isku-duwaha geesaha warqad kasta (sida iska cad laguma soo celin waraaqaha deriska ah), waxaan sameeyey .txt waxaanan la sameeyay Geotrans waxaan u beddelay UTM WGS84 aniga oo ku dhaqaaqay dhanka 'AutoCAD', una guuraya DXF ka dibna at .kml laakiin dhibaatadaydu waa kartideyda AutoCAD. Waxaa laga yaabaa inaan door weyn ka qaadanayo, xaqiiqadu waxay tahay inaanan waligey sawiri karin khadadka ama polygons-ka GEarth. Waan ku farxi lahaa haddii aad i tusi lahayd qoraal kasta oo ku soo baxa boggagaaga i caawin kara. Aad baad ugu mahadsantahay Managua.
Ricardo Roberto Ayala Jara isagu wuxuu leeyahay:
aad u xiiso badan, ka dib waxaan u baahan doonaa tabobarro qaar, mahadsanid macluumaadka,
waad khaldan tahay in codsigaan uu horey u ahaa dhulka google
Horaan u hagaajiyay iskuxirka. Waan qaldamay.
Waxba laguma soo dejiyey. Xidhiidhku wuxuu keenayaa maqaal kale. Geofumadas ????